वसन्त ऋतुको सुन्दर पक्ष के ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः फाल्गुन ६, २०७५ - साप्ताहिक
वसन्त ऋतुको सुन्दर पक्ष के ?
बिरुवाले फेर्ने पालुवा, प्रकृतिको हरियाली रूप, पारिलो घाम अनि जाडोको बिदाइ त्यसपछि त मन त्यसै चंगा हुन्छ वसन्त ऋतुमा ।
वसन्त ऋतुमा नयाँ पालुवा पलाउँछ, सबैतिर हरियाली हुन्छ । हरियाली भएपछि मन त्यत्तिकै दंग पर्छ ।
अनु शाह, अभिनेत्री
वसन्त ऋतुमा प्रकृतिको बहार आउँछ । यो सबैभन्दा राम्रो, रमाइलो र मनमोहक ऋतु भएको हुँदा यसलाई सबैले मन पराउँछन् ।
अम्बिका गुरुङ, गीतकार
प्रकृतिले पालुवा फेर्ने भएकाले जीवनमा नयाँपनको आभाष हुन्छ, नयाँ जोस–जाँगर आउँछ ।
हिमानी सुब्बा, कोरियोग्राफर
मनै आनन्दित तुल्याउने हरियाली वातावरण र पारिलो घाम अनि सित्तल मौसम नै यो ऋतुको सुन्दरता हो । फूपू तेन्जिङ शेर्पा, फेसन उद्यमी
मौसम नै रमाइलो हुन्छ, न जाडो न गर्मी । जताततै हरियाली देखिन्छ । मन चंगा हुन्छ । छोटा कपडा लगाएका सुन्दर युवतीहरूको चअलपहल बढ्छ । मौसम र वातावरणले गर्दा काम गर्ने जाँगर
पनि चल्छ ।
कुवेर गिरी, सञ्चारकर्मी
हल्का कपडा लगाएर हिँड्न पाइन्छ, कम्फर्टेबल फिल हुन्छ ।
युवराज चौलागाईं, गायक
वसन्त ऋतु भन्ने बित्तिकै म सरस्वती पूजा (श्री पञ्चमी) लाई सम्झन्छु, जसमा बालबालिकाहरूको अक्षराम्भ गरिन्छ । यति बेला बोटबिरुवा एवं फूलहरूमा नयाँ पात पलाउँछ, जुन एकदमै सुन्दर र मनमोहक देखिन्छ ।
लक्ष्मण महर्जन, अधिवक्ता
कोइलीको कुहु– कुहु र काफल पाक्यो चरीको सन्देश । फूल अनि हरिया रूखहरू, उमंग दिने समय, नयाँ क्यालेन्डर,नयाँ उत्साह र अठोट...यिनै हुन् वसन्त ऋतुका सुन्दर पक्ष ।
दिनेश डिसी, रेडियोकर्मी
सफा आकाश, नयाँ पालुवा, सुन्दर फूल अनि नयाँ वर्ष ।
निर्मला ढकाल, समाजशास्त्री
वसन्त ऋतुको सुन्दर पक्ष प्राकृतिक सुन्दरता नै हो । वसन्तमा बहार आउँछ, न गर्मी न चिसो ठिक्कको मौसम । यतिबेला प्रकृतिले पनि काँचुली फेर्छ । सबैभन्दा राम्रो, रमाइलो र मनमोहक ऋतु हो यो ।
आर्यन अधिकारी, सह–निर्देशक
पुरानो पालुवाको ठाउँमा नयाँ पालुवाको आगमन, आरुको फूलले मन लोभ्याउँछ । नयाँ सोच, नयाँ कामको सुरुवात आदि नै वसन्त ऋतुको सुन्दर पक्ष हो ।
वसन्त ऋतुमा न जाडो, न गर्मी । यो मौसम सबैलाई मनपर्छ । पुराना पातहरू झरेर नयाँ पालुवा लाग्ने ऋतु । उत्साह र उमंगको संकेत गर्ने ऋतु । सांगीतिक दृष्टिले भन्नुपर्दा कोयलीको गीत सुन्न पाइने ऋतु ।
नयाँ उमंगसँगै नयाँ पालुवा हालेका वृक्षहरू ।
निशु ढकाल, गायिका
झरेका पातहरूमा नयाँ मुना पलाउने हरियाली ऋतु अनि फूलैफूलको मौसम ।
अमर तण्डुकार, गायक
रूखमा पालुवा पलाउँछ, हरियाली प्रारम्भ हुन्छ अनि मौसम रमाइलो हुन्छ ।
उमेश खड्का, कलाकार
नयाँ पालुवा लागेका रूख, जताततै हरियाली चरा–चुरुङ्गीको मधुर धुन, लाली–गुराँसले सजिएका वन–पाखा, रुखो मनमा उमंग–उत्साह छाउने ऋतु–वसन्त ऋतु ।
अनिता आचार्य, अभिनेत्री
मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ऋतु नै वसन्त हो । यो ऋतुको सुन्दर पक्ष भनेको बोटबिरुवाले नयाँ पालुवा फेर्नु हो । यतिबेला जताततै हरियाली हुन्छ ।
विपना थापा, मोडल
रमाइलो जोस अनि नौलो उमंग नै वसन्त ऋतुको रमाइलो पक्ष हो । वसन्त ऋतुमा प्रकृतिले पनि नयाँ रूप लिन्छ भने चरा–चुरुंगीदेखि मानव जीवनमा पनि रमाइलो अनुभव गराउँछ । त्यसैले पनि वसन्त ऋतु, ऋतुहरूमध्ये सबैभन्दा रमाइलो ऋतु मानिन्छ ।
अभिनाष घिसिङ, गायक
हरेक नयाँ पालुवाको आगमनसँगै हामीमा एक प्रकारको उमंग छाउँछ ।
सङ्गराग बराइली, गीतकार
म संगीतप्रेमी परें, त्यसैले कोइलीको कुहु–कुहुले आकर्षित हुन्छु । प्रकृतिको हरभरा रूप यो ऋतुको अर्को सुन्दर पक्ष हो ।
सिर्जना कार्की, गायिका
वसन्त ऋतुको सुन्दर पक्ष न धेरै जाडो न धेरै गर्मी हुने रोमान्टिक मौसम र हरियाली नै हो ।
भावना गुरुङ, अभिनेत्री
मलाई वसन्त ऋतुको राम्रो लाग्ने पक्ष हरियाली अनि पारिलो घामका साथै हल्का चिसो हावा हो । यो मौसमले नयाँ वर्षको आभाषसमेत गराउँछ ।
हिमाल सागर, गायक
जब–जब बिरुवामा पालुवा पलाउँछ, त्यसको सुन्दरता मलाइ सार्है मनपर्छ ।
अर्जुन अधिकारी, निर्देशक
चारैतिर हरियाली अनि फुलैफूलको मौसम, बोटबिरुवामा नयाँ पालुवा पलाउनु अनि न चिसो न त्यति गर्मी ।
सञ्जय श्रेष्ठ, गायक
हरियाली दृश्य, मनमोहक सुन्दरता एवं रमणीय वातावरण नै यो ऋतुको सुन्दर पक्ष हो ।
आशिष सचिन, गायक
वसन्त ऋतु रङ्गीबिरङ्गी फुल फुल्ने मौसम हो । त्यसकारण यो समयमा एकदम सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुन्छ अनि यो मौसममा दिन लामो हुन्छ । मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्छ ।
श्री पाण्डे, समाचारवाचिका
हरियाली वातावरण रमाइलो लाग्छ । मौसम पनि आनन्दको हुन्छ । कोइलीको गीत गुञ्जन्छ, हावामा एक प्रकारको मस्ती हुन्छ जसले मनलाई तरंगित तुल्याउँछ ।
स्वेच्छा केसी, मोडल
सुकेको बोटमा नयाँ, ताजा पालुवा पलाएको देख्न पाइन्छ ।
विजया कार्की, रंगकर्मी
हरियाली तथा फूल मन नपर्ने मानिस बिरलै पाइएलान् । वसन्त ऋतुलाई ऋतुहरूको राजा पनि भनिन्छ । चारैतिर हरियाली अनि फुलैफूलले सजिएको सुन्दर प्राकृतिक दृश्य देखिनु नै यो ऋतुको सुन्दर पक्ष हो । दु:खपछि पाइने सुख झैं शिशिर ऋतुको उजाडतापछि यो मन नै फुरुङ्ग पार्ने वसन्त ऋतु प्रकृतिको एउटा सुन्दर उपहार हो ।
मलाई साह्रै मनपर्छ यो ऋतु । आफूलाई मनपर्ने रंग पनि हरियो नै भएकाले मलाई यो ऋतु आउने बित्तिकै फोटो खिच्न मन लाग्छ ।
सुलेमान शंकर, इकु, अभिनेता
प्रकृति र मानिसको सम्बन्ध एकदम नजिक छ । मलाई हरेक दृष्टिले यो मौसम एकदम प्रिय लाग्छ, रंगहरू फेरिन्छन् । एक किसिमको मिठो वासना फैलिन्छ वातावरणमा । चारैतिर रमाइलो हुन्छ । रंगीबिरंगी फूलहरू फूल्छन्, नयाँ पात पलाउँछन् ।
दुर्गा खरेल, गायिका
प्रकाशित :फाल्गुन ६, २०७५
झमझम पानी पर्दा मनमा कस्ता तर्कना उठ्छन् ?
ह्याप्पी बर्थ डे बद्री
आफ्नै माटो साक्षी राखेर
चर्को गर्मी छल्ने उपाय के होला ?
तपाईंलाई घत परेर हाँसेको क्षण कुन हो ?
साउने सोमबारको व्रत बस्दा के माग्नुहुन्छ ? असार ३१, २०७६
आइफा एवार्ड विवादमा के भन्नुहुन्छ ? असार २१, २०७६
रोपाइँ महोत्सवलाई ‘मड फेस्टिभल’ भनएकिो कस्तो लाग्यो  ? असार १५, २०७६
नेपाली संगीतको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? असार १०, २०७६
सहकर्मी कलाकारहरुको सिर्जना कत्तिको हेर्नु–सुन्नुहुन्छ ? असार ३, २०७६
२०७६/०७७ को बजेट कस्तो लाग्यो ? जेष्ठ २५, २०७६
दरबार हत्याकाण्डलाई रहस्यमय मान्नुहुन्छ ? किन ? जेष्ठ १९, २०७६
काठमाडौंको प्रदूषण घटाउन के गर्नुपर्ला ? जेष्ठ १४, २०७६
रजत वर्षमा प्रवेश गरेको साप्ताहिकलाई के भन्नु छ ? जेष्ठ ३, २०७६
बेमौसमी वर्षा हुँदा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? वैशाख २९, २०७६